7th December 2018, 07:20 pm | २१ मंसिर २०७५
‘त्यही अम्बाको रूखमा झुन्ड्याएर मारेको हुनुपर्छ। अनि समातिने डरले काटेर फाले,’ एउटा चिया पसलमा गफिने क्रममा एक स्थानीयले हामीसँग प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘नत्र फल लागेको त्यस्तो रुख किन काट्थे?'
त्यही पसलमा रहेका अर्काले सोधे, 'रङ किन लगाउनु पर्थ्यो नत्र भित्तामा?'
त्यहाँमात्र होइन, हामीले काठमाडौंमै पनि 'अम्बाको रुखमा झुण्ड्याएर मारेको रे', 'प्रमाण लुकाउन भित्तामा रङ लगाएको रे' भन्नेजस्ता ‘रे’ धेरैको मुखबाट सुनेका थियौं। सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्तो आशंकाका कथाहरु धेरै नै पोस्ट भइरहेका थिए।
अम्बाको रुख काटिनु र रङ लगाउनुसित निर्मलाको बलात्कार र हत्यासँग के कनेक्सन छ त? हामी पनि यसबारे जान्न चाहन्थ्यौं। त्यसैले महेन्द्रनगर बजारबाट करिब ३ किलोमिटर दुरी पार गरेर बम दिदी बहिनीको घर पुगेलगत्तै सोधेका थियौं - अम्बाको रुख कता थियो?
निर्मलाको शव भेटिएको ६ दिनपछि साउन १७ गते अम्बाको रुख काटिएको रहेछ। यसले थप शंका उब्जियो र अम्बाको बोटको प्रकरण राष्ट्रियमात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमार्फत् विदेशमा रहेका नेपालीमाझ पनि फैलियो। सामाजिक सञ्जाल र युट्युब च्यानलहरुले यसलाई 'सनसनी' खबरका रुपमा पस्किए।
उनले अम्बाको रुख काट्ने विषयमा गएको जेठ असारमा नै सल्लाह भएको समेत सुनाए, ‘म घर फर्किएपछि काट्छु भन्ने सल्लाह भएको थियो।'
उनले जवाफ दिए, ‘अघिल्लो वर्ष अलि-अलिमात्रै फलेको थियो।'
‘अम्बाको बोट काट्यो रे, अम्बाको बोटमा झुण्ड्याएर मार्‍यो रे भन्छन्,’ बम दिदी बहिनीको घरको बायाँपट्टिको घरमा बस्दै आएकी सुमित्रा गुरुङले हामीलाई भनिन्, ‘अम्बाको बोट काट्ने कुरा त यिनको पहिलेदेखिको हो। किनकि अम्बाको रुखमा सुकुम्बासी बस्तीका केटाकेटीहरु आउँथे। ऊ त्यो वालबाट तानेर वालै भत्काउन लागिसकेका थिए।'
उनका श्रीमान् गणेश गुरुङले थपे, ‘यो घटनासँग अम्बाको रुखको सरोकारै छैन।'
देवीले हामीलाई भनिन्, ‘असारमा नै उनीहरुको आमाबुबासँग अम्बा काट्ने कुरा भएको मैले नै सुनेको छु।'
उनले पनि पटक-पटक अम्बाको रुख काट्न सुझाव दिएकी रहिछिन्। 'केटाहरू पर्खाल चढेर अम्बा लुछ्थे। मैले असारमा पनि भनेको थिएँ- अम्बाको रुख काटिदेऊ है भनेर। चोरहरू पनि आउँछन्,' उनले हामीसँग भनिन्।
फोन सम्पर्कमा आएका महरालाई पनि हामीले सोध्यौँ। ‘हो, मैले र भगतपुरकै एक जना महिला मिलेर रुख काटेका हौँ,' उनले स्वीकारे।
(#WhoKilledNirmala अन्तर्गत अर्को भाग आइतबार)
mail us : [email protected]izmandu.com - See more at: http://www.bizmandu.com/content/contact-us.html#.U3hRM0CPBdg